Ezi zimpawu zintathu zeZodiac zoLuthando lwezilwanyana ngaphezu kwayo nayiphi na into - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ezi zimpawu zintathu zeZodiac zoLuthando lwezilwanyana ngaphezu kwayo nayiphi na into
Izilwanyana ziyamangalisa ngokulinganayo, kodwa imiqondiso ye-6 ye-zodiac ngokukodwa ithe phithi zizilwanyana zasekhaya. Ngaba uphawu lwakho lwe-zodiac lolona luthandayo lwezilwanyana?
Izilwanyana sesinye sezona zipho zinkulu zobomi, kwaye ngokuqinisekileyo ngekhe sonwabe kakhulu ngaphandle kwazo. Izilwanyana zasekhaya zihlala zifumana indlela yokuqaqambisa usuku lwethu kwaye zihlala zifumana indlela yokubeka uncumo ebusweni bethu nokuba sinoxinzelelo okanye sixhalabile. I-Astrology inefuthe kwindlela esizithanda ngayo izidalwa ezincinci zikaMama Wendalo, ke wena ume phi? Ngaba uphupha ngokuphila njengoTarzan ukuba unako, okanye ukhetha ukunxibelelana nabantu? Ezi mpawu zintathu zodiac zithanda ngaphezu kwezilwanyana ngaphezu kobomi uqobo, ke ngaba ungomnye wazo?
Izilwanyana zizidalwa ezintle kwaye ziyayenza zisizisele uvuyo olukhulu, ukuhleka kunye namaxesha amaninzi amangalisayo. Abanye bethu banothando olunyulu nolomeleleyo kubo kangangokuba kubonakala ngathi banxibelelene. Sifunde iinkwenkwezi kwaye sifumene eyona ntlobo ilungileyo yinja kumqondiso ngamnye we-zodiac.
Le miqondiso ye-zodiac zezona zibalaseleyo kwezilwanyana!
Ezi Ubuntu be-6 abunakuxhathisa ukuhamba ngaphaya kwenja esitratweni ngaphandle kokungena kwi-cuddles, kwaye uhlala ufuna ukuthimba iikati abazibona zihamba malunga neentsuku zabo. Ngaba ukulungele ukufumanisa ukuba ngubani ochitha i-99.9% yexesha labo ukuphupha emini malunga nokuvula indawo yokuhlala izilwanyana kunye nokugxotha izinja kwi-Instagram? Ukuba ufuna ukukhuthazwa ngakumbi xa kufikwa kubahlobo bethu abanoboya, kutheni ungafumani isilwanyana esifanelekileyo sophawu ngalunye lwe-zodiac ?!
Indlela yobomi 2 imisebenzi
I-Aries iyazithanda izilwanyana
Ngaphandle komlilo wabo ongaphandle, ezantsi kubuntu be-Aries yibhere enye! Abantu abangama-Aries bayanyibilika ngokoqobo xa bebona injana kwaye ngaphandle kokubetha omnye ... Xa aba bantu bejikeleze izilwanyana, icala labo elimnandi ngokuqinisekileyo libonakala.
I-Taurus ithanda izilwanyana ngaphezu kwabantu ...
Ukuba ngomnye we uninzi lweempawu zodiac ezinoxanduva kuyindalo kubuntu beTaurus ukuthanda izilwanyana. I-Taurus iyakuthanda ukungqongwa zizilwanyana kuba babanceda ngokwenene ukuba bakhabe umva kwaye baphumle.
Umhlaza ufuna izilwanyana zasekhaya ebomini babo
Ubuntu beCancer mhlawumbi bukhetha izilwanyana ebantwini ukuba sinyanisekile. Izilwanyana ezinkulu, izilwanyana ezincinci, izilwanyana ezinamaxolo, uyithiye igama, Umhlaza uyayithanda! Lo mqondiso we-zodiac ngokuqinisekileyo enye yezona zinto zinxibelelana nendalo.
IVirgo iyaphambana ngezilwanyana zasekhaya
IVirgo yenye ye th ezona zilwanyana zithanda izodiac, kwaye uhlala eziva ekhululekile phakathi kwezilwanyana kunabantu. Ubuntu beVirgo buthanda ukuchitha ixesha kunye nezilwanyana kwaye bahlala bonwabile nanini na xa befika benze ingxabano yezilwanyana zasekhaya.
I-Sagittarius ithathe inxaxheba kwindalo
Njengolunye lweempawu ezibekelwe umva kakhulu ze-zodiac, i-Sagittarius ebandayo ayithandi nto ngaphandle koku ukuchitha ixesha labo kunye nezilwanyana. Uphawu lwe-Sagittarius zodiac luthanda ukubakho kunye nendalo kunye nokuphumla kunye nabahlobo babo bezilwanyana.
NgeePisces, indalo iza ngaphambi kwayo yonke enye into
Iipisces lolunye lweempawu zodiac ezikhathalayo nezinovelwano, ezichaza ukuba kutheni zizithanda kangaka izilwanyana. Iipisces ngokuqinisekileyo ziya kuba yiyo olona phawu lubalaseleyo lwenkwenkwezi ukuvula indawo yokuhlangula izilwanyana zasekhaya kwaye bayeke imisebenzi yabo yosuku ukukhathalela izilwanyana.
Zeziphi iimpawu zeZodiac ezinethamsanqa kuthando kwaye zeziphi ezingekhoyo?
Inombolo yendlela yobomi eyi-6
izibini zetaurus kunye nesagittarius
I-huffington iposa ii-horoscopes umhlaza